तपाईंको विवाहको लागि शीर्ष पहेंलो लेहेंगास - PAMPEREDPEOPLENY.COM - फेसन
शीर्ष Yellow पहेंलो लेहेंगा जुन तपाईंको दुलहीको पोशाक बाल्टिन सूचीमा हुनुपर्दछ
घर फेसन प्रचलनहरू फेसन ट्रेंड्स देविका त्रिपाठी द्वारा देविका त्रिपाठी | मे २२, २०२०
धेरै दुलहीहरू आफ्नो विवाहको दिनमा रातो वा मरून रंग लगाउँछन्। यदि रातो छैन भने, तिनीहरू सामान्यतया गुलाबी, नीलो र हरियो र h्गका लागि अप्ट इन गर्छन्। जहाँसम्म, हाम्रो प्रश्न यो छ कि किन पहेंलो रंगलाई वेवास्ता गरिन्छ? यसको चमक र चमकको आधारमा, यो र color्ग प्राथमिकता सूचीमा हुनुपर्दछ जब विवाह लेहेन्गा छनौट गर्दा? त्यसोभए, हामीले तपाईंको लागि चार पहेंलो-हुइद दुलही लेहेंगा छान्नुभयो जुन तपाईंलाई तपाईंको सोच बदल्नको लागि राजी हुनेछ।
सौजन्य: अस्थ नारंग
सुशोभित पहेंलो लेहेंगा
यदि तपाईं केहि प्रकाश र सरल चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हल्का पहेंलो लेहेन्गा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन सजिलो छ। अस्थ नारंगको यो लेहेंगा एकदम उत्तम छ यदि तपाईं आफ्नो विवाहको दिनमा सारांश र चहकिलो पहेंलो लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने। चम्किरहेको चाँदीका पुष्प लहरा द्वारा केन्द्रित, यो लेहेंगा निश्चित रूपले तपाईंलाई विवाहको दिनमा इन्स्टाग्राम-योग्य क्षणहरू दिनेछ। यस मोडेलले उनीसँग पहेँलो डुप्ट्टा लिए तर तपाईं यसलाई पूरक डुप्ट्टा वा केही रंग ब्लकका लागि गुलाबी डुप्ट्टा पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं यो लेहंगा लगाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने हीरा र सुनका गहनाका साथ तपाईंको लुक अप गर्नुहोस्।
सौजन्य: अनिता डोंगरे
रंगीन पहेंलो लेहेंगा
यदि तपाईं पुष्प बान्की मन पराउनुहुन्छ, तपाईं यसलाई चयन गर्न सक्नुहुन्छ अनिता डोंगरेको Chara lehenga, जुन उनको SS20 संग्रहबाट आउँदछ। यो लेहेन्गा ती व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त छ, जो पूर्ण पहेँलो स्प्लाश चाहँदैनन्। स्कर्टमा पूरक सीमाको साथ गुलाबी-टोन्ड प्रकृति-प्रेरित एक्सेन्टहरूले तपाईंलाई एक वर्ग टाढा देखिन्छ। हामी पनि सुशोभित किनारको साथ subtly-पैटर्न ब्लाउज मन पराउछौं। तपाईं यस लेहेन्गालाई हल्का पहेंलो डुप्ट्टासँग हेममा गुलाबी रंगको टसल्सको साथ टोली गर्न सक्नुहुनेछ। आफैलाई रत्न गहनाका साथ शोभायमान गर्नुहोस् र गुलाबी ओठको छायाको साथ तपाईंको अवतारलाई नक्कल गर्न नभुल्नुहोस्।
सौजन्य: सब्यसाची मुखर्जी
लाइट पैटर्न पहेलो Lehenga
यदि तपाईं एक हुनुहुन्न, जो सज्जनका लागि जान्छ, तपाईं सब्यसाची मुखर्जीले हल्का बान्कीको पहेंलो लेहेंगा रोज्न सक्नुहुन्छ। गन्तव्य विवाहको लागि आदर्श, यो लेहेंगा हल्का छ र तपाईंलाई गह्रौं गहना लगाउन अनुमति दिँदछ र अधिक कपडा नदेखिए पनि। लेहेन्गा सेतो-टोन्ड बान्की द्वारा उच्चारण गरिएको छ र मिल्दो डुप्ट्टाले पोशाक पूरा गर्दछ। तपाईं यसलाई भारी चोकर र मोतीका लेयरहरूसँग जोडी गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि मोडेलले गह्रौं सुन वा डायमण्ड सॉलिटेयर सेटहरू यस लेहेन्गासँग लगाउँदछ।
सौजन्य: पूजा हेगडेको इन्स्टाग्राम
सादा पहेलो Lehenga
यदि तपाईं कुनै बान्की वा सुशोभित खेल चाहनुहुन्न भने, तपाईं सादा पहेलो लेहेंगा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। पूजा हेगडे यो उज्यालो पहेंलो मनीष मल्होत्रा ​​लेहेंगा दिवाली ब्यासमा लगाउँछिन् र उनको पोशाकमा सादा पहेलो ब्लाउज र एक मिल्दो भारी स्कर्ट रहेको थियो। उनको लेहेंगा सादा-सुन्दर थियो, उनले एक जटिल-द्वारा-पूरा फूलको पहेंलो डुप्ट्टाको साथ आफ्नो लुगा बनाए। हो, किनकि यो लेहेंगा एकदम राम्रो उज्ज्वल छ, तपाईं आफ्नो लिपि अक्सिडाईज गरिएको चाँदीको गहना वा हिरा आभूषण सेटको साथ एक्सेसराइज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, गुलाबी टोनको साथ तपाईंको मेकअपलाई हाइलाइट गर्नुहोस्।
त्यसोभए, कुन पहेलो लेहेंगा तपाईंले छनौट गर्नुभयो भने छनौट गरियो भने? हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
कसरी निजी भागहरू छिटो
शिक्षक दिन स्कूल सजावट विचारहरु
साडीमा स्लिमर कसरी देखिन्छ
स्वामी विवेकानंद जीवनबाट प्रेरणादायक घटनाहरू